“Si wadajir ah ayaan u dabaal degi doonaa maalinta ay noqotoba” – Jürgen Klopp – Gool FM
(England) 02 Juun 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa u balan qaaday taageerayaasha Reds inay u soo laaban doonaan si ay ugu dabaal degaan si wadajir ah guulaha kooxda, haddii ay taasi suurtogal noqoto.
Hadalka Jürgen Klopp ayaa wuxuu imaanayaa xili ay kooxda Liverpool ku dhow dahay in loo caleemo saaro hanashada koobka Premier League iyadoo bilaa taageero ah, kuwaasoo sugayay mudo fog inay daawadaan kooxdood oo markale ku guuleysan doonto horyaalka Ingiriiska.
Waxaa leysku raacay in dib loo bilaabo xilli ciyaareedka tartamada gudaha Ingiriiska ee 2019/2020 maalin Arbaco ah 17-ka bisha June, kaddib markii loo joojiyay in muddo ah sababa la xiriira caabuqa COVID-19.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp, wuxuuna yiri:
“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano koob, waxaana dooneynaa inaan si wada jir ah ugu dabaaldegno xilliga saxda ah, marka ay suurtagal tahay”.
“Laakiin illaa waqtigaas, waa inaan ku dadaalnaa sharciga oo aan sameeynaa wixii ku habboon, sababtoo ah taasi ma noqon doonto markii ugu dambeysay ee aan wada dabaaldegno”.